Tag: waxyaabaha la wadaago | Martech Zone
Tag: waxyaabaha ku habboon
7 Sababood oo foomamka rasaasta u dhintaan
Isniin, Janaayo 30, 2017 Sabtida, Janaayo 28, 2017 Muxamed Yaasiin
Dukaanleyda dijitaalka ah iyo dukaamada lebenka & hoobiyaha ayaa had iyo jeer ugaarsi ugu jira habab cusub oo cusub oo lagu soo qabto hagitaanno badan oo loogu beddelo macaamiisha lacagta bixisa. In la yiraahdo tani waa caqabad weyn waxay noqoneysaa qirasho xad dhaaf ah, maadaama imaatinka internet-ka uu ka dhigay tartan adag midkasta oo ganacsi la maleyn karo. Sannadaha oo dhan, tafaariiqdu waxay ku dhejin doonaan foomamka "Nala Soo Xiriir" websaydhkooda iyagoo rajaynaya in daalacayaasha xiisaha lihi ay ku xirmi doonaan
Qabashada macdanta "lead" ayaa in muddo ah soo jirtay. Xaqiiq ahaan, waa imisa meheradood oo maareeya ganacsiga GET. Macaamiisha ayaa booqda websaydhkaaga, waxay buuxiyaan foom raadinaya macluumaad, waad ururisaa macluumaadkaas kadibna waad wacdaa. Fudud, sax? Ahh… sidaad u maleyn lahayd ma aha. Fikradda, nafteeda iyo nafteeda, waa waali fudud. Aragti ahaan, waa inay noqotaa wax fudud in laga xumaado in la soo qabto tilmaamo badan. Nasiib darrose, waa
Jawaab gaaban? Haa Uguyaraan xagga dhaqanka, iyo "dhaqameed" waxaan ula jeednaa dalbashada macluumaadka soo booqdayaasha kahor intaadan bixin qiimaha, ama adeegsiga waxyaabaha udub dhexaad u ah sida dhiirigelin ah. Aynu dib u dhigno gaariga xamuulka ah taariikh ahaan: Shaqadeenna ka caawinta macaamiisha inay kordhiyaan beddelaaddooda internetka, waxaan ogaanay hoos u dhac weyn, oo isdaba joog ah oo ku yimaada booqdayaasha websaydhada oo buuxinaya foomamka hoggaanka dhaqanka. Sabab wanaagsan ayaa jirta taas. Dabeecada iibsadaha ayaa isbedeleysa, badanaa sababta oo ah farsamada, macluumaadka